Isikhokelo seNtengiso - Yunis International Trading Co, Ltd.
Umda ophakathi weSixeko soRhulumente weSithili 1
Iindidi zamashishini: Iinto zokudlala eziqhelekileyo, amathoyizi atshisayo, izixhobo zokudlala zamanzi, ubucwebe, ubucwebe, ubucwebe bezinwele, izinto zokuhombisa, ubucwebe beentyatyambo, ubugcisa bokuhlobisa, ubugcisa beminyhadala, ubugcisa bezokhenketho, intyatyambo, ikristali yeceramic, iifreyimu zefoto.
Indawo yokuqala idityaniswe siSithili A, iSithili B, iSithili C, iSithili D kunye ne-E, kwaye inemigangatho emine. Le ndawo yindawo yentengiso yeentyatyambo ye-Yiwu Artificial kunye ne-Yiwu Artificial flower accessories kwimarike, yi-Yiwu Toys Toy, imakethi ye-Yiwu Jewry yemarike, i-Yiwu hair accessories yemarike, yi-Yiwu Arts & Crafts kwimakethi, yi-Yiwu Photo Frame yemakethi, imakethi ye-Yiwu Souvenirs.
Oku kulandelayo yindawo yemveliso ethile:
Kumgangatho wokuqala: Intyatyambo eyintsimbi ikwisithili A nakwiSithili B; Izinto zokuntyatyambo zeentyatyambo ezikwiSithili B.; into yokudlala yasePlush kunye neTranslable ziyafumaneka kwiSithili C. Into yokudlala yesiqhelo ikuSithili D nakwisithili u-E.
Umgangatho wesibini: Izixhobo zeenwele kwiSithili A, iSithili B nakwiSithili C; Ubucwebe bukwiSithili C, iSithili D nakwiSithili u-E.
Umgangatho wesithathu: Ubugcisa boMtshato kunye nezoBugcisa kwiSithili A; Ubugcisa bobugcisa kunye neZinto zokuhombisa kwiSithili A, iSithili B kunye neSithili D; I-Porcelain & Crystal ikuSithili D; Ubugcisa bohambo kunye neeMisebenzi yobugcisa kwiiSithili D; Isakhelo sefoto sikwisithili D nakwisithili E; Izinto zokuhombisa ubucwebe ziSithili u-E.
Umgangatho wesine: Intyatyambo eyintsimbi ikwisithili A; Ubucwebe bukwiSithili A, iSithili B, iSithili C, iSithili D kunye neSithili E; Ubugcisa kunye nezoBugcisa kukuSithili B, kwiSithili C, kwiSithili D nakwiSithili u-E.
ISixeko soRhwebo lweHlabathi (iMpuma), isiXeko seNtlangano yoNxweme
Iindidi zamashishini: Izixhobo ezifanelekileyo kunye neebhegi, ii-Umbrellas, iiVenkile zeZithuthi, iiVenkile zemvula kunye neebhutsi zePLOYI, Izixhobo zeHardware, Hardware & Kitchenware & Bath, Izitshixo, iiClocks kunye neewotshi, isixhobo seKhaya, isixhobo soMbane, Izixhobo zonxibelelwano, Izixhobo kunye neeMeters.
Umba weSibini udityaniswe siSithili F kunye nesiThili G kwaye unemigangatho emi-5. Umda weSibini yindawo yentengiso ye-Yiwu RAIN GEAR, Imakeydi ye-Yiwu kunye neMakethi yeeNgxowa, iMarike ye-Yiwu Lock, iMarike ye-elektroniki ye-elektroniki, imarike ye-Yiwu Metal Kitchenware, imakethi ye-Yiwu Watts, imakethi ye-Yiwu Electronics.
Umgangatho wokuqala: Poncho, Coat yeMvula kunye nee ambrella zikwisithili F; Iibhegi kunye neebhegi zikwisithili uF.
Umgangatho wesibini: Isitshixo sikwisithili F; Izixhobo zikwisithili F; Izixhobo zeHardware zikuSithili F nakwiSithili uG.
Umgangatho wesithathu: I-Metal Kitchenware ekwiSithili F; Izixhobo ze-Elektroniki yamakhaya zikwisithili F; Unxibelelwano lukuSithili G; Iwotshi kunye neClock zikwiSithili G; Izixhobo ze-elektroniki zikwisithili uG.
Umgangatho wesine: Igalari yemveliso yengingqi ikwisithili F; Igalari yemveliso yeAnhui kwiPhondo F; Igalari yemveliso yaseHongkong ikwisithili F; Igalari yemveliso ye-Sichuan kwiPhondo F; Igalari yemveliso yaseKorea ikwisithili F; Izixhobo zeHardware zikuSithili F ukuya kwiSithili G; Iityesi kunye neengxowa zikuSithili G; Izinto ze-elektroniki kwiSithili G; Ukujongwa kunye neClock kukwisithili g.
Umgangatho wesihlanu: Iziko loRhwebo lwaNgaphandle.
IZithili zoRhwebo zeSithili zeSithili 3
I-Yiwu International Trade City, iSithili se-3 yindawo yokwakha ye-460,000 yeekhilomitha. Umgangatho omnye ukuya kwemithathu uneemitha ezingama-6, 000 zeemayile ezili-14. Amagumbi amane ukuya kahlanu aneemitha ezingaphezu kwama-600 ezimitha ezingama-80-100 eemitha. Umgangatho wesine wenzelwa iziko lokuthengisa ngqo.
Amacandelo oShishino: amaqhosha, ii-Zippers, iiglasi, iziqholo, iipensile kunye nee-Inqaku lePhepha, iiVenkile zeOfisi kunye nezinto zokubhala, amaNqaku ezemidlalo, izixhobo zeMidlalo, izixhobo.
Indawo yeNtengiso ye-Yiwu Futian indawo yesithathu ibandakanya imarike yokuthengisa izinto ze-Yiwu, imakethi yeglasi ye-Yiwu, imakethi yemidlalo ye-Yiwu, ukuthengiswa kwempahla yeofisi yase-Yiwu, i-cosmetology ye-Yiwu kunye nemakethi yokufikelela ezimotweni, ubuhle be-Yiwu yobuqu kunye nentengiso yokunyamekela, i-Yiwu iqhosha kunye nepakethi ye-zipper, imakethi yengubo ye-Yiwu imakethi yokuhombisa yepeyinti.
Umgangatho wokuqala: Zonke iintlobo zePen, i-inki, iimveliso zamaphepha kunye neeglasi.
Umgangatho wesibini: Zonke iintlobo zezinto zokubhala, izinto zeofisi, ezemidlalo kunye nezokuzonwabisa.
Umgangatho wesithathu: Zonke iintlobo zezithambiso & zokufakelwa kwezinto zokuthambisa, ubuhle buqu kunye nokhathalelo, izibuko kunye neekhowudi, iqhosha & ne-zipper kunye nezixhobo zempahla.
Umgangatho wesine: iifektri zezithambiso zobuhle kunye nokhathalelo lobuqu, iifektri zemidlalo kunye nezinto zangaphandle, iifektri zezinto zokunxiba.
Umgangatho wesihlanu: umzobo wokuhombisa kunye nezinto zokuhombisa ezipeyintiweyo.
IZithili zeSithili zoRhwebo zeSithili 4
I-Yiwu International Trade City District District 4 yavulwa ngokusesikweni nge-21 ka-Okthobha ka-2008. Indawo yolwakhiwo lweentengiso i-1,8 yezigidi zeekhilomitha, kunye namashishini angaphezu kwe-16,000 erenti aqeshiswa ngamashishini angaphezu kwamawaka ayi-19,000.
Iindidi zamashishini: Izinto ezifuneka mihla le, amaNqaku aKodwa kunye neCotton (kubandakanywa iBra, Underwear, Scarves, Gloves, Hats kunye nezinye izinto zokwenza imitya yokotini), uCable shoewear (kubandakanya amabhanti), Knitwear (hosiery), iiNtloko, iiTowels, Uboya, ilaphu.
Indawo yeNtengiso ye-Yiwu Futian indawo yesine ibandakanya isokisi ye-Yiwu kunye nemakethi ye-leggings, imakethi yekhaya ye-Yiwu, imakethi ye-Yiwu, imakethi ye-Yiwu, imakethi yokucheba uboya, imakethi ye-Yiwu, imakethi yezihlangu ze-Yiwu, imakethi yeethayile ze-Yiwu, imakethi ye-Yiwu. Isakhelo se-Yiwu kunye nendawo yentengiso yokufikelela kunye nendawo yokuhamba ye-Yiwu.
Umgangatho wokuqala: Zonke iintlobo zeesokisi kunye ne-leggings.
Umgangatho wesibini: Zonke iintlobo zezinto zasendlini, iimpahla ezihlanganisiweyo nezomqhaphu, iminqwazi, iigloves, iindlebe.
Umgangatho wesithathu: Zonke iintlobo zoboya obukrwada, iitayi, iitawuli, izihlangu. Umgangatho wesine: Zonke iintlobo zebhanti kunye nokufakwa kwebhanti, ngaphantsi kwempahla, isikhafu kunye ne-leggings.
Umgangatho wesihlanu: Iziko lokuhamba yi-Yiwu, amalaphu, izihlangu, amakhaya (umdaka ovela Chaozhou), isakhelo kunye nezinto ezifakwayo nesakhelo.
Isithili se-5 sigubungela indawo engama-266.2 eehektare, indawo yolwakhiwo ye-640, 000 yeemitha zesikwere, utyalomali olupheleleyo lwe-1.42 yeebhiliyoni zeyunyu (kufutshane ne-221,5 yezigidi zeedola), imihlaba emihlanu, ezimbini phantsi komhlaba, ezinamashishini angaphezu kwama-7,000.
Isithili se-5 esisandula ukwakhiwa senzelwe kuphela iimveliso ezingeniswe elizweni, izinto zokulala kunye namakhethini, amalaphu, izinto zeemoto kunye nezithuthuthu
Indawo yeNtengiso ye-Yiwu Futian yesihlanu ibandakanywa kwimakethi yokutya ethunyelwa ngaphandle, imakethi yokunakekelwa kwezempilo, imakethi yokungenisa elizweni, Imakethi yobugcisa kunye neZothutho, iZiko leMiboniso lase-Afrika, imakethi yokulala, imakethi yomtshato, imakethi yewig, imakethi yomkhenkce, imakethi yempahla engenziwanga, imakethi yemoto. , Ivenkile yentengiso yezilwanyana
Umgangatho wokuqala: Zonke iintlobo zokutya okungeniswa elizweni, iimveliso zokhathalelo lwempilo, amalaphu angeniswa elizweni, ubugcisa bokuthengisa kunye nobugcisa, iziko lemiboniso lase-Afrika kunye nezinye izinto ezingeniswayo.
Umgangatho wesibini: Zonke iintlobo zeebhedi, iimpahla zomtshato kunye neewigs. Umgangatho wesithathu: Zonke iintlobo zamakhethini, izinto ezenziwe ngemisonto eluhlaza kunye nezixhobo zomtshato.
Umgangatho wesine: Zonke iintlobo zezinto zemoto, iinxalenye zesithuthuthu kunye nezinto ezihambisa ipetroli.